Dowlad Dayax Gacmeed Ka Direeysa Soomaaliya | Xaqiiqonews
Dowlad Dayax Gacmeed Ka Direeysa Soomaaliya
Warbixino laga soo xigtay ilo ku dhow dowladda Turkiga ayaa sheegaya in Soomaaliya ay tahay halbowlaha qorshaha Turkiga ee sahminta hawada gaar ahaan qorshaha 2028 ee Turkiga isku dayaayo in uu caga dhigto dayaxa.
Madaxweynaha Turkig Rajib Dayeb Orgdan ayaa todobaadkii tagay shaaca ka qaaday qorshaha Turkiga uu ku doonaayo in uu qalabkiisa ku geysto dayaxa.
Sidoo kale Aqri: Waa Tan Xogta Dayax Gacmeedyadii Aad xalay Aragtay
Ilo ku dhow dhow dowladda Turkiga ayaa sheegay in Soomaaliya ay tahay meel muhiim ah rabitaanka Turkiga ee hawada iyo dayaxa, iyada oo sababtana lagu sheegay juqaraafiga dhuleedka ee Soomaaliya madaama Soomaaliya ay ka mid ah 11-ka dal ee adduunka oo dhan kuwaasi oo uu Dhulbaraha mara.
Serdar Huseyin Yildirim oo ah madaxa hay’adda Hawada u qaabilsan Turkiga oo wareysi siinaayey BBC Turkish ayaa ka gaabsaday in uu magac dhawa Soomaaliya isaga oo sheegay in uu wada hadal xasaasi ah u socda iyaga iyo dowladda martigelin doonta qorasha oo aan la magac dhabin.
Soomaaliya kuma cusba mucaashiqiinta hawada iyo xiddigiska, Faransiiska ayaa isku dayey sanadkii 1960 in uu gantaal ka rido Soomaaliya, madaama Soomaaliya ay dhacda dhulbaraha, goobtaasi oo fududeyneysa in gantaalka si wanaagsan loo tuuro.